ဖြန့်ကျက်ရောင်း၊ Formstack ထိန်းချုပ်နေရာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ Martech Zone
ဖြန့်ကျက်ရောင်း၊ Formstack ထိန်းချုပ်နေရာနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
သောကြာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 23, 2012 တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 1, 2018 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့်လည်ပတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာတစ်ခု Martech Zone ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ကိရိယာများကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်များနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်များ၏ဆိုဒ်များကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ မင် တကယ်တော့သူတို့စတင်ဖွဲ့စည်းမီ ... သူတို့ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကမိတ်ဆွေများဖြစ်ရပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်ထောင်သူတစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာကျွန်တော်ပျော်ခဲ့တယ်။ ရိုးရာမီဒီယာနဲ့ startup ကနေသူခုန်ထွက်လာတာကိုမြင်ရတာကျွန်တော်အရမ်းပျော်ခဲ့တယ် မင်.
Formstack ယခုမှစိုက်ပျိုးခဲ့သည် အသုံးပြုသူ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်! ငါတို့သည်သူတို့ကို Martech ၏စပွန်ဆာအဖြစ်ရှိသည်အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အခြားပုံစံရေးဆွဲသူများလည်းရှိပါသည်။ သီးသန့်ပလက်ဖောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံတည်ဆောက်သူများလည်းရှိသည်။ မင် သူတို့ဟာအမှန်တကယ်အရောင်းသမားများနှင့်မသိဝါဒီပလက်ဖောင်းဖြစ်နေသောကြောင့်စျေးကွက်၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းကိုထွင်းထုထားသည်။ မှအနည်းငယ်သာလူသိများသော့တစ်ခု မင် အောင်မြင်မှုကတော့သူတို့ဟာအခြားပလက်ဖောင်းတွေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုတွေကိုတည်ဆောက်ရာမှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီစာရင်းဟာမယုံနိုင်စရာပါပဲ မင် beta ကိုခေါ်အပိုဆောင်းပလက်ဖောင်းဖြန့်ချိခဲ့သည် ထိန်းချုပ်နေရာ.
Formstack ၏ Launch Pad အသစ်သည်သင်၏အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အွန်လိုင်းပုံစံများ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ e-commerce စတိုးဆိုင်များနှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများ၏ပေါင်းစည်းထားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော web app များ၏အချက်အချာဖြစ်ပြီးသင်၏လုပ်ငန်းကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလည်ပတ်စေလိမ့်မည်။ ဤတွင်အလွန်ကြီးစွာသောအသုံးပြုသူပုံပြင်ပါပဲ မင် Launch Pad ကိုရှင်းပြရန်တီထွင်ခဲ့သည် -
Oliver သည်ဒေသန္တရချမ်းသာသည့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး avid တစ်ယောက်ဖြစ်သည် မင် အသုံးပြုသူသည်သူ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များကိုအွန်လိုင်းတိုးချဲ့ရန်ရှာဖွေနေသည်။ သူဘယ်လိုအသုံးပြုခဲ့သလဲဆိုတာကိုလိုက်နာပါ မင် သူ၏လုပ်ငန်းကိုနောက်အဆင့်သို့တက်ရန် Launch Pad ကိုစတင်ခဲ့သည်။
အသုံးချ - အိုလီဗာသည် web tool ကို အသုံးပြု၍ business ည့်သည်များသည်သူ၏စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်သူ၏ virtual စတိုးအသွင်အပြင်ကိုချိတ်ဆက်ရန်အလို့ငှာအလျင်အမြန်စုစည်းထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးရန် Page tool ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ Oliver သည်သူ၏အမှတ်တံဆိပ်၏အရောင်များနှင့်ခံစားမှုများနှင့်ကိုက်ညီရန်သူ၏စာမျက်နှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခဲ့သည်။
ရောင်းချ - Oliver စာမျက်နှာမှစျေးဝယ်သူများသည် Stores tool မှတစ်ဆင့်သူ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးကို ၀ ယ်နိုင်သည်။ ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ Oliver သည်သူ၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီအတွက်စာမျက်နှာများကို သတ်မှတ်၍ အသုံးပြုသူများကိုအမှာစာများလှန်လှောကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည်။
ဆက်သွယ်ပြောဆို - ဖောက်သည်များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုစုဆောင်းပြီးနောက်တွင်အိုလီဗာသည်နောင်လာမည့်ရောင်းအားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအကြောင်းသိစေချင်သည်။ သူသည် Launch Pad ကို သုံး၍ ဤပစ္စည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်စိတ်ကြိုက်အီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုလျင်မြန်စွာဖန်တီးရန်နှင့်သူ၏ပရိသတ်အသစ်များကိုဆိုင်သို့၊ In-store သို့မဟုတ် online သို့ပြန်လာရန်အားပေးခဲ့သည်။
နှင့် မင် 's Launch Pad, သင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုဗဟိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုတွင်စတင် (သို့မဟုတ်တိုးမြှင့်) နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စီမံရန်လွယ်ကူသည်၊ စတင်ရန်အချိန်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်၊ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်လုပ်ချင်သောအရာကိုပြန်ရရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယနေ့ Launch Pad အခမဲ့စမ်းသပ်မှုစတင်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြေးပေးသွင်းမှုသည်တစ်လလျှင် ၂၉ ဒေါ်လာသာရှိသည်။